Isbeddelka Is-dhexgalka Macluumaadka Is-dhexgalka | Martech Zone
Isbedelka Isweydaarsiga Macluumaadka
Talaado, Disembar 10, 2013 Talaado, Janaayo 21, 2014 Savannah Marie
Sanadihii la soo dhaafay oo dhan, sawir qaadayaasha meel walba joogeen iyo sabab macquul ah. Tirakoobku badanaa waa lagama maarmaan in lagu daro kalsoonida, iyo sawir-qaadista waxay fududeyneysaa in la jabiyo xogta laga yaabo inay haddii kale culeys ku noqon lahayd akhristaha celceliska ah. Adiga oo adeegsanaya sawir-gacmeedka, xogtu waxay noqoneysaa mid waxbarasho iyo xitaa xiiso leh in la akhriyo.
Maaddaama sanadka 2013 uu ku dhow yahay inuu soo dhowaado, sawir-gacmeedka ayaa mar kale beddelaya sida dadku u dheefshiraan aqoonta. Hadda, sawir-qaadistu kuma koobna oo keliya midabbo dhalaalaya, noocyo indho-qabad leh iyo naqshado jilicsan. Qaarkood, si ku habboon loogu yeero istiraatiijiyad is-dhexgal ah, waxaa ka mid ah animation, xiriiriyeyaal iyo waxyaabo kale oo dadka u fududeynaya inay si fudud u liqaan faahfaahinta macluumaadka laftiisa laftiisa. Qoraalladaan sare ee sare ayaa sidoo kale dadka u tilmaamaya jihada halka laga helayo waxyaabo dheeraad ah oo la xiriira. Sii wad akhriska si aad u barato dhowr sababood si aad uga dhigto qayb ka mid ah xeeladahaaga suuqgeynta waxyaabaha mustaqbalka.
Way Fudud Yihiin Naqshadeynta
Sababtoo ah sawir-gacmeedka is-dhexgalka ah ayaa muuqaal ahaan soo jiidanaya, dadku waxay u qaadan karaan in walxaha naqshadeynta ay aad u adag yihiin. Nasiib wanaagse, tikniyoolajiyadda sida naqshadeynta jawaabta waxay gacan ka geysatey sameynta sawir-gacmeedyada is-dhexgalka oo fudud si loo abuuro, barnaamijyada qaarna waxay ka dhigaan mid wax ku ool ah xitaa haddii aad isku dayeyso inaad mid dhisto iyadoon asalka u ahayn kombiyuutarka.
Way Caawin Karaan Astaantaada ama Fariintaada Go Viral
Waxaad u maleyneysaa inaad ka fekereyso tusaalooyin yar oo ah fiidiyowyada Youtube ama xusuus-qorrada oo ahaa kuwo aan horay loo maqal hal maalin ka dibna si lama filaan ah looga hadlo qof walba oo ka socda martigalinta sheekada habeen dambe ilaa dhammaan saaxiibbadaada warbaahinta bulshada. Badanaa, xawaaraha dhacdooyinka noocan oo kale ah waxay la xiriiraan sida nuxurka loo bixinayo.
Mid ka mid ah faa iidooyinka is-dhexgalka isweydaarsiga ayaa ah inay kuu oggolaadaan inaad adeegsato labada erey iyo sawirrada dhaqaaqa si aad ugu kaxeyso dhibic guri. Haddii dad ku filan fiiro gaar ah u yeeshaan, fariintaada ama magacaaga ayaa maalmo uun ku jiri kara bushimaha qof walba. Mid ka mid ah tusaale ahaan, dhaqdhaqaaqayaasha Suuriya waxay adeegsadeen is-dhexgal is-dhexgal ah si ay u muujiyaan aagagga iyo noocyada iska caabbin aan rabshad lahayn, oo ka kooban midabbo qurux badan, qaab quruxsan iyo xiriiriyeyaal waxtar leh oo sharraxay dadaallada sababaha gaarka ah oo faahfaahsan.
Waxay Caawinayaan Xisaabtanka Macluumaadka
Qaar badan oo ka mid ah istiraatiijiyadda is-dhexgalka waxaa loogu talagalay inay yeeshaan qaybo adeegsadayaashu dhex socdaan, oo ay ku qalabaysan yihiin aagag ballaaranaya markii lagu taabto tilmaamaha jiirka. Ka sokow caawinta qabashada dareenka, astaamahani waxay hagaajinayaan suurtagalnimada in dadku raagi doonaan oo wax baran doonaan, halkii ay ka riixi lahaayeen meelo kale. Iskudhafka isdhexgalka ayaa u oggolaanaya aragtida inay xakameyso khibradooda iyo heerka ay ku bartaan. Qaybaha CJ Pony waxay sameeyeen is-dhexgal is-dhexgal ah oo loogu talo galay hal-abuure ka shaqeeya warshadaha baabuurta, Carroll Shelby, iyo guushiisii ​​taaj ee, Shelby Cobra. Infographic-kaani wuxuu u oggolaanayaa daawadaha inuu “kaxeeyo” Shelby Cobra adduunka oo dhan.
Isdhexgalka ayaa sidoo kale caawin kara haddii aad isku dayeyso inaad gudbiso faraqa u dhexeeya tirada. Haddii adeegsadayaashu ay jiirkooda ka dhaqaajin karaan qayb ka mid ah garaafka oo ay daawan karaan markay ballaaranayaan si ay u metelaan tiro gaar ah, waxay ka dhigi kartaa xogta inay u badan tahay inay xusuusta ku dhegaan, halkii si dhakhso leh loo illoobi lahaa.
Waxay kaa caawin karaan inaad abuurto hoggaamiyeyaal
Weligaa miyaad ka fikirtay inaad u isticmaasho sawir-gacmeed is-dhexgal ah qalab iib ah? Taasi waxay noqon kartaa wadada mustaqbalka, gaar ahaan dadka iibiya waxyaabaha loo geyn karo dadka wax iibsada isla markaaba, sida buugaagta elektaroonigga ah. Haddii aad isku dayeyso inaad dadka xiiseyneyso ururinta talooyin deg deg ah oo loogu talagalay degitaanka shaqada ugu fiican ama aad rabto inaad kor u qaaddo tirada dadka iska diiwaangeliya waxyaabaha aasaasiga ah ee bartaada, isweydaarsiga is-dhexgalka ayaa dadka u ogeysiin kara waxa laga filayo haddii ay wax iibsadaan .
Kaliya u oggolow infographic inay ku daydaan codka iyo qaabka ay ka kooban yihiin waxyaabaha aad iibineyso, oo hubi inaad ku darto xiriiriye dadka toos ugu qaadaya bog ay shey ka iibsan karaan.
Xitaa waad badali kartaa istaraatiijiyaddan adoo kudaraya shey is dhexgal ah oo u ogolaanaya qof inuu iska diiwaan galiyo warsidahaaga hal guji oo kaliya. Tijaabi tan markii aad soo bandhigto faahfaahinta macluumaad buuxa oo xaqiiqooyin xiiso leh leh, oo aad rabto inaad hubiso in daawadayaashu ogaadaan sida loo helo waxyaabo badan oo isku mid ah.
Way Wareejin Karaan Aragtida
Shirkad bixisa caymiska caafimaadka ee dadka Filibiin ku nool waxay sidoo kale ku tiirsaneyd qaab muuqaal ah oo is-dhexgal ah si looga taxadaro sida qaaliga u noqon karto in lagu bukoodo qof aan caymis lahayn. Hadafku wuxuu ahaa in laga codsado dadka laga yaabo inay rajeynayaan inay caafimaad qabaan oo ay go'aansadaan kharashka caymiska caafimaadka inuu yahay mid aad u weyn in la qaado. Adoo si taxaddar leh isbarbar dhigaya kharashyada la xiriira cudurrada waaweyn iyo caymiska caafimaadka, abuuraha wuxuu si cad u rajeeyay inuu beddelo aragtida ah in caymiska caafimaadku yahay kharash aan loo baahnayn.
Waad qorsheyn kartaa inaad sameyso wax la mid ah si aad ula xiriirto macaamiisha ka dib is faham yar ama xitaa inaad muujiso faa'iidooyinka qaarkood ee alaabadaada oo laga yaabo inay horey u ogeyn inta badan bartilmaameedkaaga bartilmaameedka.
Tusaalooyinka kor ku xusan waa sababo dhowr ah oo xikmad leh in loo adeegsado sawirada isdhexgalka xeeladaha suuqgeynta soo socota. Qaar ka mid ah suuqleyda ayaa mar horeba u adeegsaday si ay u helaan natiijooyin wanaagsan, caannaankoodu wuxuu umuuqdaa inuu si joogto ah u kici doono bilaha soo socda.
Tags: Sawirro is-dhexgal ahmarketingMacluumaadka Suuqgeyntaisbeddellada
Savannah Marie waa qoraa madaxbannaan oo xiiseeya suuqgeynta internetka. Waxay aad u jecel tahay raacitaanka SEO, suuqgeynta internetka iyo isbeddellada bulshada. Raac iyada Twitter iyo Google+
AdTruth: Aqoonsiga Dhageystayaasha Universal Mobile
Awoodda Macdanta Macdanta iyo Nidaamyada Taageerada Go'aanka
11, 2013 at 12: 08 AM
"Sawirku wuxuu u qalmaa kun eray!"
12, 2013 at 1: 43 PM
Waad ku mahadsantahay wadaagida maqaalka! Naqshadeynta macluumaadka ayaa ah habka ugu wanaagsan ee loogu rogi karo akhristayaasha sawir qaadayaal